टिपनटापन Archives - NepalDut NepalDut
समन्वय समिति मुस्ताङको बारेमा जानकारी दिनको लागि भनेर वेबसाइट बनाइएको छ तर कर्मचारी फेरिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत वेबसाइटमा भने पुरानै कर्मचारीलाई बर्तमान भनेर देखाइएको छ । तत्कालिन जिल्ला समन्वय अधिकारी पुष्पराज कटवाल सरुवा भएर उनको ठाउँमा तिर्थराज खनाल आएको समेत महिना दिन पुग्न लागिसक्यो तर हालसम्म वेबसाइट अपडेट गरिएको छैन । त्यस्तै तत्कालिन सूचना अधिकारी केदार सिंह थापा समायोजन भएर हाल घरपझोङ गाउँपालिकामा कार्यरत छन् तर वेबसाइटबाट उनको… पुरा पढौ
फेशन डिजाईनर काजल शर्मा यतीबेला साउनको फेशन डिजाईनमा व्यस्त छिन् । असारमा पाँच ओटा म्युजिक भिडियो र केही विवाह समारोहको लागि पहिरन तयार गरेकी काजलले साउन लागेसँगै महिलाहरुको लागि हरियो र पहँेलो रँगको विभिन्न पहिरन तयार गरेकी हुन् । तीन महिना भन्दा लामो समय लकडाउनका कारण घरमै बसेर समय बिताएकी कागजले लकडाउन खुकुलो भएसँगै ललितपुरको कुपन्डोल स्थित आफ्नो बुटिक ‘काजल क्रियसन’ खोलेकी हुन् । अभिनेत्रीहरु सारिका केसी, सगुन शाही ठकुरी… पुरा पढौ
कोरोना क्याप्पसुललाई क्यप्प हटाएर सुल मात्र राख्नु पर्ने देखिन्छ । क्यप्पसुल भनेको पेटमा पुगेपछि पग्लाने पदार्थभित्र औषधिजन्य धुलो राखि बन्द गरिएको औषधि हो । यसले रोग निको भै बिरामीलाई सितलता प्राप्त हुन्छ । आज प्रसारित कोरना क्यप्पसुल सुल जस्तो लाग्यो । यसले झटपटि बढायो । कोरना क्यप्पसुल बनाउँदै बनाउँदै गर्दा बनाउने मानिस थकित बिचलीत भएका छन् कि ? यी क्यप्पसुल खादा वोकवोकि लाग्यो । क्यप्पसुल भनेको त शरिरको प्रतिरोध शक्ति… पुरा पढौ
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिररहेको कोरोना भाइसको कारण हालसम्म करिव ११ लाखभन्दा मानिस संक्रमित रहेको र करिब साढे ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । कोरोनाको संक्रमण हावासरी फैलिरहेको विश्वमा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढीरहेको र मृतकको संख्या समेत बढिरहेको परिपेक्षमा नेपालमा हालसम्म जम्मा ६ जनामा संक्रमण देखिनु र कोरोनाको कारण मानिसको मृत्यु नहुनु दैव संयोग हो वा वास्तविकता बाहिर नआएको हो यकिन गर्न सकिएको छैन । दैनिक १०० हाराहारीमा… पुरा पढौ
कपाल वा नङ निरन्तर बढ्छन् । यी मानव अंगका उत्पादन सुन्दरता बढाउने चिज समेत हुन् । मानिसहरु मन लागेको बेला कपाल वा नङ काट्ने गर्छन् । धर्मशास्त्रमा जीवनका नियमहरु उल्लेख छन् । त्यसमा दारी र कपाल काट्न नहुने दिन समेत उल्लेख छ । यी दिनमा दारी कपाल काट्दा अशुभ हुने मानिन्छ । यी दिनमा नकाट्नुस् कपाल शास्त्रका अनुसार मंगलवार, विहीवार र शनिवार कपाल काट्नु हुँदैन । यसले अशुभ गराउने विश्वास… पुरा पढौ
चिनी भनेको यस्तो तत्व हो, जुन धेरै खानेकुरामा पाइन्छ। तर, यसले शरीरलाई फाइदा गर्दैन। खानै छाड्यौं भने हाम्रो शरीरमा के असर पर्ला त? कति फाइदा होला, कति नोक्सान? अध्ययनअनुसार मान्छेलाई चिनी वा चिनीयुक्त खानेकुराबाट टाढा बस्न गाह्रो पर्छ। गुलियो खानेकुरासँगको हाम्रो सम्बन्ध आजको होइन, यो मानव विकासक्रमसँग जोडिएको छ। हाम्रा पुर्खाहरू आफ्नो आहारा निम्ति जनावरको शिकार गर्थे। जंगलमा पाइने वनस्पति र फलफूल खान्थे। त्यो समय गुलियो फल सितिमिति भेटिन्थेन। गुलियो… पुरा पढौ
तनावमुक्त जीवनका लागि के-के गर्ने ?
व्यस्त जीवनशैलीका कारण विभिन्न प्रकारका रोगहरुले सजिल्यै मानिसको शरीरमा प्रवेश पाएको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल बढ्ने जस्ता रोगहरु लाग्नु सामान्य नै जस्तो भइसक्यो । जति मानिस पैसामुखी, सफलतामुखी बन्न थाल्छन् तब उनीहरुको दैनिक जीवनयापन तनावपूर्ण हुन थाल्छ । जसले गर्दा पनि अनेक प्रकारका रोगहरुले सताउँन थाल्छ । तनावका पनि धेरै कारणहरु हुन्छन् । व्यक्तिगतदेखि कामको तनावदेखि जुन क्षेत्रमा मानिसहरु बढी लागि परेका हुन्छन् त्यहाँको तनावले मानिसहरुलाई आफ्नो ख्याल… पुरा पढौ
कति बेला नुहाउँदा राम्रो होला, बिहान वा बेलुका ? पहिलो पटक सुन्दा यो निकै साधारण प्रश्न लाग्ला तर जब तपाईं यो प्रश्न आफ्ना परिचितलाई सोध्नुहुन्छ, यसको भिन्न उत्तर पाउनुहोला । कतिले राती नुहाउनु राम्रो भन्लान् कतिले भने बिहान । नुहाउने समय स्थितीमा निर्भर हुन्छ जस्तै तपाईंको छालाको प्रकार, तपाईंको कामको प्रकार र तपाईं कति प्रदूषण वा धुलोसँगको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ । तपाईंले नुहाउने सही तरिकालाई यसरी छान्नुहोस् । तपाईंले बिहान नुहाउनुपर्छ… पुरा पढौ
मानिसको मुख सम्पूर्ण स्वास्थ्यको मूल ढोका हो । तर, मुख स्वास्थ्य भन्नाले मुखभित्र मात्रै देखिने समस्या होइन । यसमा अनुहार पनि पर्छ । मान्यतया उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी कहाँ शरीर तथा पेट उपचार गर्न जाँदा डाक्टरले मुख आँ गर भन्छन् । जिब्रो तान्न लगाउँछन्, त्यसपछि मुखमा लाइट बालेर र्हेछन् । किनभने मुख सम्पूर्ण शरीरको ऐना हो । जस्तै मुटुकोे बिरामी भएको मानिसमा अनुहारमा कालोपना आउनका साथै अर्कै खालको रङ पनि देखिन्छ… पुरा पढौ
भारतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा भुत विद्या
भारतको प्रतिष्ठित बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय९बिएचयु० ले भूत देखेको वा भूत लागेको बताउने व्यक्तिहरुको उपचार गर्ने कोर्समा पढाइ हुने भएको छ। काशी हिन्दु विश्वविद्यालय नामबाट समेत परिचित ‘बिएचयु’मा चिकित्सकहरुलाई जनवरीदेखि ‘भूत विद्या’ विषयमा ६ महिने कोर्स पढाउने तयारी गरिएको हो। ‘साइकोसोमेटिक डिसअर्डर’सँग सम्बन्धित रहेर चिकित्सकहरुलाई ‘भूत विद्या’ विषयमा कक्षा दिइनेछ। प्राचीन हिन्दु प्रणालीबाट औषधि र रोग निको पार्ने तरिकामा दख्खल राख्ने आयुर्वेदका प्रशिक्षकहरुबाट यस विषयमा अध्यापन हुनेछ। आयुर्वेद विषयका डिन यामिनी… पुरा पढौ